Ikhaya STARS E-EUROPE I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Isikweletu ku-Sportmirtese naku-BesthqWallPepers
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yombono weBhola ngesiteketiso “Mimmo”. Indaba yethu ye-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube yimanje.
Impilo kanye nokuvuka kweDomenico Berardi. Ama-Image Credits: Sportmirtese, Castrumcropalatum kanye EzemidlaloMole.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokuhlukahluka kanye neso lakhe ngokushaya amagoli. Kodwa-ke bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaDenico Berardi's ezithakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Domenico Berardi wazalwa ngosuku lwe-1st luka-Agasti 1994 eCariati, idolobha elisesifundeni seCosenza esifundeni saseCalabria eningizimu ye-Italy. Ungomncane ezinganeni ezintathu wazalelwa kunina, uMaria noyise, uLuigi.
UDenico Berardi wazalelwa abazali abazali abaziwa kangako. Isikweletu Sezithombe: I-PxHere ne-Sportmirtese.
Isizwe samaNtaliyane sobuzwe obumhlophe obunezimpande ezincane ezaziwayo sakhuliswa edolobheni laseBocchigliero esifundazweni iCosenza e-Italy lapho akhulela khona kanye nomfowabo omdala, uFrancesco kanye nodadewabo, uSeverina.
UDomenico Berardi wakhulela eBocchigliero esifundazweni iCosenza. Isikweletu Sezithombe: I-WorldAtlas kanye ne-Sportmirtese.
Ukukhula kuleli dolobhana, uBerardi wayengekho emfushane ngezizathu ezazizomnika ithuba lokudlala ibhola nabangane bakhe cishe njalo ngosuku lwesonto. Kwesinye isikhathi wake enze sengathi unesisu esibuhlungu ukuze agweme isikole futhi akujabulele ukudlala lo mdlalo.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngenxa yokuzalwa emndenini othanda ibhola, u-Young Berardi wabhaliswa esikoleni seCastello ibhola eMirto - iH hamlet yaseCrosia, futhi esiFundazweni saseCosenza, e-Italy - lapho athatha khona izinyathelo zakhe zokuqala ebholeni lokuncintisana.
UDomenico Berardi uthathe isinyathelo sakhe sokuqala emncintiswaneni webhola lezinyawo esikoleni saseCastello. Isikweletu Sezithombe: Sportmirtese ne-TUON.
Ngenkathi eqeqesha eSikoleni, uBerardi wafunda futhi wakhombisa ubuciko bezinto ezazifanekisela ifomu lakhe elihle lokushaya amagoli elizayo. Ngenxa yalokho, umqeqeshi wakhe wayevame ukuqeqesha amalungu eqembu ukuthi alidlulisele kuye ngezinhloso eziqinisekile.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngesikhathi uBerardi esemdala kwi-13 e-2008, wahamba nabazakwabo eMirto ukuze akwazi ukubhaliswa esikhungweni sebhola leCosenza lapho ayezosebenzisa khona isikhathi esifushane kakhulu somsebenzi wakhe wentsha (2008-2010).
UDomenico Berardi ikhadi lokugcina likamazisi ngaphambi kokujoyina iCosenza. Isikweletu Sezithombe: Sportmirtese.
Ngeviki elinemicimbi, uBerardi wavakashela ikhampasi eyunivesithi yomfowabo omdala uFrancesco eBodena. Ngenkathi esezinkundla zamakhampasi, wazibandakanya kumdlalo wezinhlangothi ezinhlanu nomfowabo namanye amalungu omphakathi waseyunivesithi. Engazi kuBerardi, kwakukhona ama-scouts aqhamuka kuSassuolo kule midlalo ayenanzelela ithalente lakhe elingavuthiwe.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
Ngakho-ke, uBerardi oneminyaka engu-16 walethwa eSassuolo lapho akhuphuka khona lapho. UBerardi wenza isikwati sakhe sokuya eqenjini lokuqala leqembu kwi-27th ka-Agasti 2012 ngesikhathi seSerie B ngokumelene noCesena futhi waqhubeka nokusiza uhlangothi lwayo ukuthi lwenyuselwe kuSerie A.
Yize ukukhuphuka kukaBerardi ngezigaba kungadonsa abaningi ngokushesha, akubanga njalo ngaphandle kwezinqumo ezinzima. Umlandeli webhola osanda kukhula abenamaqembu amaningi eYurophu afuna ukusayinwa kwakhe. Kodwa-ke, wazibona esemdala futhi wakhetha ukuqeda inqubo yokuvuthwa eSassuolo.
UDomenico Berardi uthathe isinqumo sokuhlala eSassuolo yize eheha amakilabhu amakhulu ngefomu lakhe elihlaba umxhwele. Isikweletu Sezithombe: Castrumcropalatum.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Eminyakeni eyalandela (i-2013 - 2015) uDomenico waba ngomunye wabasubathi abasebancane abathembisa kakhulu e-Italy futhi wathola imiklomelo eminingana efaka nemiklomelo yeBravo yama-2015 yomdlali osemusha ovelele kunabo bonke e-Europe.
Yini enye? ubhalwe kathathu njengomunye wabadlali abasebancane be-100 abasebancane emhlabeni nguDon Balón ku2013, 2014 nase2015. Ushesha phambili nesikhathi sokubhala, uBerardi ungumdlali ovelele kunabo bonke abakwaSassuolo futhi ungumdlali olandelwa kahle oshaye izintshisekelo kuRomani, Tottenham naseLiverpool. Abanye, njengoba besho, umlando.
UDenico Berardi ngumbhali wamagoli aphezulu ka-Sassuolo ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: I -BleacherReport.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Ukuqhubekela phambili ezindabeni eziphathelene nempilo yothando lukaDenico Berardi, mangaki amagama umuntu angawathola encwadini yakhe yomlando wokuthandana futhi yini isimo sakhe sobuhlobo samanje ngesikhathi sokubhala le bio?
Okokuqala, uBerardi akaziwa ukuthi wayethandana nomuntu wesifazane ngaphambi kokuthi ahlangane nentombazane yakhe abe ngumkakhe - uFrancesca Fantuzzi. UFrancesca uqale wabona uBerardi ngesikhathi somdlalo wentsha futhi ngemuva kwalokho waxhumana naye ngoFacebook. Akukaze kwehlukaniswe kusukela ngaleso sikhathi futhi bangokwemukela indodana (amad) noma indodakazi (noma amadodakazi) nganoma yisiphi isikhathi maduze.
UDenico Berardi esithombeni esithandekayo noFrancesca Fantuzzi othandekayo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
UDenico Berardi uduma kusuka kunsapho yomndeni osezingeni eliphakathi. Siveza amaqiniso ngokuphila komndeni wakhe.
Mayelana nobaba kaDenico Berardi: ULuigi ungubaba kaBerardi. ULuigi ubengumuntu othanda i-Inter Milan ngaphambi kokuzalwa kukaBerardi. Kodwa-ke, unendawo ethambile kaSassuolo indodana yakhe ayidlalelayo. Ubaba ongisekelayo wabathathu usize uthando oluqinile lukaBerardi ngebhola futhi uyaqhubeka nokumeseka kuze kube yimanje.
Mayelana nonina kaDenico Berardi: UMaria ungumama kaBerardi. Ungunkosikazi wasendlini owasiza ukukhulisa uBerardi nezingane zakubo. Umama ongisekelayo wabathathu naye unezintshisakalo ebholeni. Eqinisweni, ungumxhasi weJuventus FC futhi, iklabhu lakhe labancane kunabo bonke - uSassuolo.
UDomico Berardi wakhuliswa ngabazali okwaziwa kancane ngaye. Ama-Credits Wezithombe: ClipArtStudio kanye I-TransferMarket.
Mayelana nabafowabo bakaDenenico Berardi: UBerardi unamadodana amabili amadala. Bahlanganisa umfowabo uFrancesco kanye nodadewabo uSeverina. Yize kungekho okuningi okwaziwayo ngezingane zakubo, hhayi abantu bezemidlalo abasebenza njengabakwaBerardi. Kodwa-ke, bobabili bayalithanda ibhola futhi balandela umdlalo ngentshiseko.
Mayelana nezihlobo zikaDomenico Berardi: Kude kude nomndeni kaBerardi, akaziwa kakhulu ngogogo wakhe ongumama kanye noyise wezingane zakhe ngenkathi abalume bakhe, omalume, abazala bakhe, umshana wakhe kanye nomshana wakhe besazokhonjwa.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Ukhulume ngobuntu bukaBerardi, unesimo esimangazayo esibonisa isimo sabantu abanempilo esiqondiswa uLeo Zodiac Sign. Ngaphezu kwalokho, ulinganisele, unembile futhi unobuhle phansi emhlabeni.
Isidlali esiveza ngokulingana imininingwane ngempilo yaso yangasese neyangasese, sinentshisekelo nezinto zokuzilibazisa ezibandakanya umjaho we-F1, ukuhamba, ukubhukuda, ukudlala imidlalo yevidiyo, ukulalela umculo nokuchitha isikhathi esiningi nomndeni nabangane.
UDenico Berardi unentshisekelo kumjaho weF1. Uyabona UCharles Leclerc esithombeni? Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Ngokuphathelene nendlela uBerardi enza ngayo futhi asebenzisa ngayo imali, inani lakhe net lisabhekwa ngesikhathi sokubhala ngenkathi inani lakhe lemakethe limi ku- € 20 million. Amalungu omnotho omncane owaziwayo kaBerardi aqala ukusebenza ngemali yakhe yemiholo.
Yize lo mdlali engasheshi ukuveza ingcebo yakhe ngokukhombisa izimoto nezindlu zakhe zokunethezeka, umkhulu ekuhambeni ngezindleko ezibizayo lapho ethengisa khona imali nisebenzisa isikhathi esihle nabangane bakhe.
UDenico Berardi ube nesikhathi esihle endaweni yokuphumula ebizayo nomngane wakhe uMarco Benassi. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Domenico Berardi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Indaba yobuntwana kaDomico Berardi kanye ne-biography eqaqa ngayo leli qiniso elincane noma elincane elaziwa ngaye.
Inkolo: UDenico Berardi akayona inkulu inkolo ngenkathi kungekho zinkomba ezikhomba izinkolelo zakhe ngesikhathi sokubhalwa. Ngakho-ke akunakushiwo ngokusobala ukuthi uyikholwa noma cha.
Ama-tattoos: UBerardi ubheka ubuciko bomzimba njengezengezo ezidingekayo emfanekisweni wakhe omuhle. Ngakho-ke, une-tattoo eyodwa enkulu engalweni yakhe yangakwesobunxele. I-tattoo ikhombisa inombolo yehembe likaBerardi i-25 ngenkanyezi enama-roses. Ngaphansi kwale tattoo kuyithuluzi elinjenge-anchor elinezintambo.
Ukuqhubeka kwe-Domenico Berardi Tattoo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ukubhema Nokuphuza: UDenico Berardi akaziwa ukuthi ubhema ngesikhathi sokubhala. Izizathu zokuphila ngale ndlela zinqunyelwe ekutheni ubuhlakani bebhola abusekhohliwe ukubona izinzuzo ezitholwayo ngokuphila impilo enhle.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Domenico Berardi yethu Yobuntwana Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
U-Andrea Belotti Ingane Yomlando I-Untold Biography Facts
U-Leonardo Bonucci Childhood Story Plus
UDaniele De Rossi Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Gianluigi Buffon Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso